‘भगवान भरोसा’ सुदूरपश्चिम, ६० हजार बढी क्वारेन्टाइनमा, छैन पिसिआर, कहाँ गयो साढे ३ अर्ब ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणले भयावह अवस्था निम्तिने देखिएको छ ।
आरडिटी परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिने दर बढी देखिनु र पिसिआर परीक्षण तथा आइसोलेसनको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा अवस्था डरलाग्दो हुनसक्ने देखिएको हो ।
वरिष्ठ फिजिसियन शुभेशराज कायस्थ भन्छन्, ‘रेडजोनबाट आएकाहरूको पिसिआर जाँच जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ । नत्र स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम छ ।’
शुक्रबार मात्रै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले हालको पिसिआर मेशिनले चाप धान्न नसक्ने भन्दै तत्कालका लागि स्वाब परिक्षण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एकातिर उच्च संख्यामा क्वारेन्टाइनमा मानिस रहनु, अकोतर्फ पर्याप्त जाँच नहुँदा स्थानीयवासी चिन्तित बनेका हुन ।
प्रयोगशाला एउटै हुँदा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएकी धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर ४ की ५५ बर्षीय महिलाको अन्त्येष्टिपछि कोरोना पुष्टि भएको छ । शुक्रवार दिउसो १२ बजे सेती प्रादेशिक अस्पतालको डायलासिस वार्डमा मृत्यु भएकमी महिलाको शनिबार बिहान अन्त्येष्टि भइसकेको थियो, तर अन्त्येष्टिपछि मात्रै कोरोना पुष्टि भएको रिपोर्ट आएको थियो ।
यसअघि बाजुराकी बालिकाको पनि मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि भएको छ । यसले पनि सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य अवस्था र सरकारको तयारीलाई के, कति र कुन अवस्थामा छ ? भन्ने कुराको उदाङ्गो बनाएको छ ।
शनिबार दिउँसोसम्मको तथ्याङकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १०५ जना पुगेको छ । संक्रमितमध्ये दुईजनाको मृत्यु हुँदा १८जना डिस्चार्ज भएका छन् भने ९१ जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार दिउँसो नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिममा ६० हजार २४३ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी पहाडी जिल्लामा रहेका छन्, जहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा छैन ।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा थप ७ जनामा देखियो कोरोना
क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या सबै प्रदेशको भन्दा बढी हो ।
रोकियो स्वाब संकलन
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउनुपर्छ । तर ६० हजारभन्दा बढी नागरिक क्वारेन्टाइनमा रहेको बेला कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य भने रोकिएको छ । पिसिआरको त कुरै छोडौं, आरडिटी किटबाट समेत सबैको परीक्षण हुन सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ हालसम्म ७ हजार पिसिआर तथा ३२ हजार ७५२ जनाको आडिटी जाँच गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण गर्ने एक मात्र प्रयोगशालामा हो, धनगढीको पशु अन्वेशण प्रयोगशाला । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले ९ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिँदै शुक्रबारदेखि स्वाब संकलन कार्य रोक्न भनेको छ ।
धनगढीको पशु अन्वेशण प्रयोगशालामा दैनिक २५० जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण हुन्छ । तर, त्यहाँ १ हजार १०० स्वाब संकलन भइसकेका छन् । डिफ्रिजको क्षमता नहुँदा स्वाब बिग्रिने भन्दै ५ दिनका लागि स्वाब संकलन कार्य रोक्न निर्देशन दिइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले बताए ।
भारतबाट आउनेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएसँगै स्वाब संकलनको मात्रा पनि बढेको छ । तर, परीक्षण गर्ने बढी क्षमता नहुँदा समस्या आएको छ ।
निर्णय भयो, जडान भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको १५ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धनगढी, बैतडी र डोटीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त निर्णयबारे के प्रगति भयो स्वयम् प्रदेश सरकार अनविज्ञ छ । मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार अब दौडिने बताए पनि कोरोनाविरुद्ध अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेशका सबै संरचना थचारिने टिप्पणी हुन थालेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाबाट इटालीका प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
‘१ लाख कीट किनेर परीक्षण व्यापक गर्न बारम्बार भनियो’, सांसद लिलाधर भट्ट भन्छन्, ‘तर प्रदेश सरकारले २० हजार मात्र खरिदको निर्णय गर्याे । त्यो पनि निकै ढिला गरि ।’
कोरोना परीक्षण गरिँदै ।
निर्णय गर्नुबाहेक प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका लागि केही पहल गरेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णयपछि संघीय सरकारले धनगढीमा एउटा पीसीआर मेसिन सञ्चालन गरिसकेको छ । तर, प्रदेश सरकार भने आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन उदाशिन छ ।
आरडिटी परीक्षण र पिसिआर मेशिन नहुँदा जिल्लाहरु झन त्रसित बनेका छन् । यसले संक्रमित ट्रेसिङ गर्न समेत समस्या देखिएको उनले बताए । अहिले आरडिटी गर्दा धेरैमा पोजिटिभ देखिएको छ । तर उनीहरुको पिसिआर टेष्ट नहुँदा भगवानलाई हात जोडनु बाहेक विकल्प देखिन्न ।
भद्रगोल क्वारेन्टाइन, कहाँ गयो साढे ३ अर्ब ?
सुदूरपश्चिममा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हालसम्म ३६ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । देशभर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएकोमा सुदूरपश्चिममा राहत लगायतका क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।
तर लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारले अन्यशीर्षकमा भने साढे तीन अर्ब खर्च गरेको देखिन्छ । २५, ३० लाख पर्ने पिसिआर मेशिन किन्न भने प्रदेश सरकारले सकेको छैन ।
‘सरकारले नचाहेकै हो या ढंग नपुगेको हो । जनता मर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत झारा टार्ने काम भएको छ’, अहिले यस्ता प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देखिन्छन् ।
भारतबाट आएका नेपालीलाई टिप्परमा राखेर घर पठाइँदै ।
६० हजारभन्दा बढी बसिरहेका क्वारेन्टाइन भद्रगोल अवस्थामा छन् । सुदूरपश्चिममा जेठमा मात्रै ७० हजारभन्दा बढी नागरिक भारतबाट भित्रिएका छन् । भारतबाट आउँदासमेत नागरिकहरुले सास्ती सहेका थिए, अहिले अब उपचार नपाई मरिने त्रासमा उनीहरु छन् ।
देशका अन्य स्थानबाट आएकाहरूको त गणनासमेत गरिएको छैन । भारतमा विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न शुरू गरेसँगै त्यो संख्या फेरि बढ्नेछ ।
एक महिनाअघि कोरोना बिरामीमुक्त भएको सुदूरपश्चिममा भारतबाट नेपाली आउन थालेसँगै संख्या बढ्दो क्रममा छ । यसकारण सुदूरपश्चिममा दिनमा हजारभन्दा बढी नमुना जाँच गर्ने मेसिन आवश्यक भएकोले अटोमेटिक सिस्टम मेसिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायमा पत्र पठाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक अवस्थीले बताएका छन् । तर, उक्तलाई मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको छ ।
भारत, विदेश तथा देशका अन्य स्थानबाट सुदूरपश्चिम आउनेको संख्या बढिरहेको अवस्थामा दैनिक २५० जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण भइरहेको छ ।
तर, देशमा २० वटा कोरोना परीक्षण हुँदा सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै प्रयोगशाला हुनु, त्यसैमा पनि स्वाब संकलन कार्य बन्द हुनु, भारत तथा विदेशका कोरोना रेडजोनबाट आउनेको संख्या बढ्दै जाँदा सुदूरपश्चिममा अवस्था जटिल बन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
गौरीफन्टा नाकामा भारतबाट आउने नेपालीको भीड ।
देशका अन्य प्रदेशमा कतिपय स्थानीय तहले समेत कोरोना केन्द्रित अस्पताल निर्माण गरिसकेका छन् । महाकाली अस्पतालमा जम्मा २० वटा आइसोलेसन बेडको क्षमता रहेको भीमदत्त नपाका मेयर सुरेन्द्र विष्टले बताए ।
‘कोरोना केन्द्रित अस्पताल बनाउन पहल गरेका छौं’, विष्टले भने, ‘तर प्रदेश र केन्द्रबाट अहिलेसम्म कुनै सहयोग पाएका छैनौं ।’ भीमदत्त नपाले हालै मात्र अस्पततललाई १० लाख सहयोग गरेको छ ।
सीमा नाका भएकोले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या दिनहुँ बढदै गएको उनले बताए । ‘तर पर्याप्त मात्रामा टेष्ट कीट नहुँदा समस्यामा छौं’, उनको गुनासो छ ।
ट्याग्स: काेराेना भाइरस, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, सेती प्रादेशिक अस्पताल